Haal duree dhimma araaraa ABO fi Mootummaa Itoophiyaa irratti ajajni WBO Z/K dhiyeessee akka asii gadii ta’a. Guyyaa 15/02/2019 Kabajamoo Abbootii Gadaa fi Koree Teeknikaa kabajaa fi jaalala oromummaa isiniif qabnu isiniif ibsina. Gara yaada qabiyyee dhimma xalayaa keenyaa irratti… Read More »
Iyyannaa Abbaa Torbeef! Damee Boruutin, Guraandhala 15, 2019 Torbaan darban kana keessa Shira Sadarkaa ol’aantummaa qabuun humnoota Habashaa Warra farra Uuummata Oromoo tahaniin qindaa’ee deemaa jiru saaxiluuf tattaafachaan ture. Humni kun dhoksaan dukkanaan daatee waan hojjetuuf Humna Dukkanaa (Dark forces)… Read More »
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 15, 2019 SBO GURRAANDHALA 15, 2019. Oduu fi Haala naannoo Wallagga Lixaa Onoota Begii fi Gidaamii keessa jiru irratti marii jiraataa naannoo Begii waliin taasisame